Maalinta: Diseembar 15, 2019
Safarada Mitrooyinka Mitrooga ee Madrid iyo Sicirka Tikidhada: Madrid metros oo wata 560,9 milyan oo rakaab ah sanadkii ayaa jirtay ilaa iyo 1919 waxaana ku shaqeeya Metro de Madrid. Shabakad metelo 13 xariiq iyo 182,1 mayl [More ...]
Tareen xamuul ah ayaa ku dhacay isgoyska heerka ee Kars. Mitirrada '400 mitir' ee ku dhacayay dadka 3 dadka ah ayaa ku dhintay shilka. Tareenka xamuulka qaada ah ee 3033-847, oo u ordaya Kars-Erzurum, wuxuu marayaa heerka isgoysyada ee tuulada Alisofu. [More ...]
Baadhitaan adag ee Gaadiidka Dadweynaha Manisa; Kooxo booliis ah oo ka tirsan Waaxda Gaadiidka ee Dawladda Hoose ee Magaalada Manisa ayaa sii wada kormeerkooda baabuurta bixiya adeegyada gaadiidka dadweynaha ee gobolka oo dhan. Macnaha guud, degmada Turgutlu [More ...]
Sanadihii 1948-1957 Barnaamijka Sagaalka Sanno ayaa loo aqoonsaday inuu yahay meel aad u wanaagsan marka loo eego teknolojiyada dhismaha waddada ee dalkeena, isla mar ahaantaana, barnaamijku wuxuu u saamaxay waaxda ganacsiga gaarka loo leeyahay inay soo baxaan. Guusha barnaamijka [More ...]
1923 - 1940 Turkey History Tareennada; Siyaasadda tareenka, oo hadafkeedu yahay in dalka lagu dhiso haqabeyaal, ayaa noqday mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan hannaanka abuurista suuq qaran. Dib u soo celinta khadadka la burburiyey intii lagu jiray dagaalka, in kastoo awood ahaan hooseysa [More ...]
Laydhka dheeriga ah ee lagu dhisay bixitaanka Izmit Beach Car Park wuxuu u oggolaaday gawaarida inay si fudud uga baxaan. Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli, oo hirgelisay mashruucyo badan si loo yareeyo taraafikada, ayaa wali ka sii wado qabanqaabiyadeeda xarumaha magaalada. Metropolitan [More ...]
Baaxadda adeegyadda ay u fidiyaan muwaadiniinta Waaxda Korantada Gaadiidka Magaalada iyo Maareynta Gaadiidka ayaa sii socota. Wareegtadan dhexdeeda, Xarunta Dhexe ee Kaararka Safarka, Mimar Sinan Overpass ee xeebta [More ...]
Dhismaha wadooyinka tareenka ee ugu horreeya qaarad oo dhan wuxuu ka bilaabmay Mareykanka 1863 wuxuuna ku dhammaaday bishii Maajo 1869. Fikradda ah dhismaha tareenka ayaa loo soo bandhigay Congress by Asa Whitney at 1845. Abraham Lincoln muhiimadiisa [More ...]
15 Diseembar 1912 Rad-su-Aleppo-Tripoli (203km) ayaa laga furay Wadada Tareenka ee Magaalada Anatolian Baghdad. 15 Diseembar 1917 Amiir Vahidettin iyo Mustafa Kemal Pasha ayaa Jarmalka yimid iyagoo adeegsanaya Sofia-Budapest-Vienna iyagoo wata gaari qaas ah kuna xiraya Tareenka Balkan [More ...]